जल शाहको आक्रोश–‘नेपाल आमालाई माया गर्न नेपालमै बस्नुपर्छ र ?’ – Namaste Dainik
May 25, 2020 NamastedainikLeaveaComment on जल शाहको आक्रोश–‘नेपाल आमालाई माया गर्न नेपालमै बस्नुपर्छ र ?’
अमेरिकामा रहेकी नायिका जल शाहले आफ्नो नेपाल आमालाई माया गर्न नेपाल नै बस्नुपर्छ र भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् । उनले,सामाजिक संजालमा स्टाटस कोर्दै केही मानिसले विदेशमा नबसेकाले देशलाई माया गर्छु भन्न खोजेको भन्दै यो कस्तो मानिसकता हो भनेर प्रश्न सोधेकी छिन् ।
जल शाह लेख्छिन्–‘नेपालमा बस्दैमा आफू मात्र इमान्दार? कस्तो खोक्रो बोली, छिन् छिन्मा बदलिदै जाने ? नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी कोहीपनि आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा हुन चाहन्नन्? संसारभर छरिएर उनीहरु आफ्नो सिप अनुसारको काम गरिरहेका छन्,आफ्नो परिवारको पेट पालिरहेका छन् । उनीहरुलाई मलाई जस्तै देशप्रतिको कर्तव्य, सम्मान र प्रेम देखाउन कसैको अनुमती चाहिन्छ र ?’
जल अगाडि लेख्छिन्–‘नेपालीको पनि दुइवटा जात हुन्छ र? के देश बाहिर बस्ने नेपाली,नेपाली नै होइनन् ? देशमा बसेर ठूलो गफ हाकेर आफ्नो देशलाई ठग्न र नङ्ग्याउन त हामीलाई आउँदैन । हामीलाई आफ्नो देश रक्षाको लागि मर्न आउँछ । खोक्रो राष्ट्रबाट मुर्दावाद । जय देश ।’
साइकलमा यात्रा गरिरहेका विष्णुको ट्याङ्कर को ठक्कर बाट ज्यान गयो ।
सिराहामा मध्यरात मा घाटी छि`नी ह`त्या।शरीर छ टाउको छैन।
May 12, 2020 May 13, 2020 Namastedainik